Shina mpamokatra mari-pamantarana hafanana sy mpanamboatra | Fangda
* Fangda Thermal Transfer Labels dia manana fahamendrehana amin'ny fahamendrehana, zavatra malefaka, tahiry tarehy fotsy-fotsy ho an'ny fanontana farany ambony sy fitiliana tsy misy hadisoana.
* Ny tendrena avo sy ny fametahana maharitra dia azo itokisana sy mahomby izay tena tsara amin'ny tontolo fampiharana hafa.
Fampiharana ny mari-pamantarana Thermal transfer:
* Ny famantarana ny vokatra maharitra amin'ny marika dia mahazatra; ny labels dia mila mijanona ho azo antoka mandritra ny androm-piainan'ny vokatra.
* Ny fonosana dia mety misy soratra mifamatotra na mifangaro amin'ilay fonosana. Ireo dia mety mitondra vidiny, kaody barcode, fanondroana ny UPC, fitarihana fampiasana, adiresy, dokam-barotra, fomba fahandro sns. Izy ireo koa dia azo ampiasaina hanampiana hanohitra na hanondroana fanodinkodinana na familiana pilotra.
* Ny mari-pamantarana amin'ny mailaka dia mamaritra ny mpandray anjara, ny mpandefa ary ny fampahalalana hafa mety ho ilaina amin'ny fitaterana. Fonosana rindrambaiko maro toy ny programa fikirakirana teny sy programa mpitantana fifandraisana no mamokatra mari-pamantarana fandefasana mailaka namboarina avy amina data napetraka izay mifanaraka amin'ny fenitra paositra. Ireo labels ireo dia mety misy koa ny barcode chiffres sy ny fepetra fitantanana manokana hanafainganana ny fandefasana.
* Volavola manokana azo isafidianana: fotony maro samihafa, refesina maty sns.
Previous: Mpandefa mailaka
Manaraka: Mpanoratra poly